Aduunka - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Caalam)
Aduunka waa meere kamid ah iskujoogga Meereyaasha Qorraxda. Aduunka isagoo marinkiisa ama wadadiisa ku jira ayuu qorraxda ku wareegtaa. Qaabka waa ugxan yahay – waa sida goobaab wareegsan oo labada doc in yar ka diisan. Taa waxay ina garadsiineysaa in fogaanta uu had walba aduunka qorraxda u jiro sanad gudaheed aanay isku mid ahayn. Halkii jeer oo aduunka ku soo wareegto qorraxda waxay ku qaadata 365 ¼ maalin. Sanad walboo afaraad oo shintiris-sanadeedka (kalendarka) ka mid ah wuxuu noqdaa 366 malmood, waxaana la yiraahda sanad shindhalad ah (skuddår). Sanad walboo 4-aad waa inuu maalindheri ahaadaa, maxaa yeelay aduunka 365 maalin in ka badan bay ku qaadata halkii wareeg. Haddi aan sidaa la yeelin xooga qalad ah baa tirsiga galaaya. Sidaa daraadeed bey sanad shindhalad ah ugu jirin qarni walboo aan u qaybsami karin 400. Tusaale sanadkii 1900 ma ahayn sanad shindhalad ah, haseyeeshe sandakii 2000 wuxuu ahaa shindhalad, waayo waa loo qaybin kara 400. Xilliyada Sanadka aduunku wuxuu mariin meerkiisa ku jiraa isagoo 23,5 º darajo qorraxda ka janjeersan. Sidaas daraadeed fogaanta sare ee qorraxda ay had walba inoo jirto wey kala duwan tahay sanadka gudihiisa.
Labada Cirif EE aduunka[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Kala duwanaanta fogaanta ay qoraxdu dhulka u jirto waxay aad ugu weyn tahay woqooyiga iyo koofurta kakoonka dhulka. Gobollada saaran hareeraha dhulbaraha wey ku yartahay kaladuwanaantaasi Gobollada ku kala yaal labada cirif ee aduunka, oo la kala yiraahdo Qudbiga woqoyi iyo Qudbiga koofureede, maalin kasto oo ka mid ah xilliga jiilaalka qorraxda kama dhacdo oo cirkay ku taallan tahay. Bartanka xilli-barafeedkuna waa qorrax la’aan. Gobollada dhulbaraha agagaariyase hal berina qorraxda kama maqnaato, oo cirkay sare ayey ugu shidan tahay. Kala duwanaanta hadba inta fogaan ay sanadka gudihiisa qorraxdu ka korreyso aduunka.Hadba intii loo sii dhowaado aagga woqooyi ama aagga koofureed bey fogaanta sii weynaataa. Sidaas daraadeed intiiba dhulbaraha woqooyi ama koofur looga sii fogaanayo bay kala duwanaashada xilliyada sanadkuna sii kordhaan. caadi iska dhig sxb
habeenka iyo maalinta[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Markii laga hadlaayo habeenka iyo maalinta Qoraxda waxaa dhahnaa: ”Qorraxdu waa dhacday ama waa soo baxday”. Inkastoo aynu had iyo jeer aan sidaa ku tilmaamno, Hadana Qoraxdu ma aha wax dhaca mana soo baxda, ee dhulkaa isku udub-wareegta. Dhulka inuu hal mar si buuxda isugu udub-wareegana waxay ku qaadata 24 saac. Inta dhulku isku wareegayo, Qorraxdu inftiinkeeday ku haysaa, oo sidaas bey habeen iyo maalin ku kala noqoto. waxaa kuu cadeeynaya inaysan qoraxda dhicin marka aad moodo in aay kaa dhacday hadii aad joogto Somalia qorraxda waa u muuqataa dadka galbeedka kaa sii xiga siiba sida America dadka joogo subax ayeeyba u tahay oo marka ay ayaga ka miriqdo adigana kuu soo muuqanee
Wikimedia Commons waxee heysaa war la xiriiro World.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Aduunka&oldid=187111"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 7 Diseembar 2018, marka ee eheed 14:48.